नेपाली भाषाको मौलिक विधा साइनोसँग विमर्श
छायादत्त न्यौपाने ‘बगर’
खै त ! स्वाधीन सुख ?
जीवन्त नेपाली रहर ।
१.नेपाली भाषामा सुरु भएको साहित्यको पछिल्लो विधा हो साइनो । गण्डकी प्रदेशमा प्रचलित ‘सैना’ शब्दको विकसित रुप साइनु/साइनोको कोशीय अर्थ नाता/सम्बन्ध हो । यसको परम्परित अर्थ व्यक्ति–व्यक्तिबिचको नाता/आफन्तमा सीमित थियोे । वर्तमानमा यसले (२०७६ साउन १६ गतेदखि) आफ्नो अर्थ विस्तार गरी सिङ्गै जीवनजगत्सँग जोडिएर सिर्जनात्मक दृष्टिले सृष्टिका सम्पूर्ण प्राणी र प्रकृति, संस्कृति, इतिहास, विज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्रसमेत यावत विषयको नातेदारका रुपमा चिनिएको छ ।
२.साइनो सिर्जना आरम्भको छोटो समयमा व्यापक बनेको छ । यसले स्रष्टा मस्तिष्क र पाठक मनमा पसेर नवीन अनुभूति सम्प्रेषण गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा उम्रेर त्यसैमा झाँगिन भ्याउनु यसको फरक विशेषता हो । आज साइनो उन्नाइस महिने शिशुउमेरमा झन्डै अठार सय स्रष्टाको अभिव्यक्ति माध्यम बनेर फक्रेको छ । यसलाई पाठकले विश्वभरिबाट पछ्याइरहेका छन् ।
साइनो नेपाली जनजीवनको मार्मिक अनुभूतिलाई मूर्तरुप दिने साहित्यिक कर्म हो । यसले अबलम्बन गरेको उल्लिखित मानक पछ्याएर सिर्जना हुँदै जाँदा निकट भविष्यमै समग्र नेपाली परिचय उचालिने विश्वास लिन सकिन्छ ।
३.साइनोले स्रष्टा र पाठक दुवैलाई दुइटा प्रभाव दिएको अनुभव गर्न सकिन्छ । एउटा हो, यसको सात,आठ र नौ अक्षरी संरचना सजिलो छ । यसको रचना सजिलै गर्न सकिन्छ भन्ने सोचाइ । अर्को हो, यसका तीन शब्दगुच्छाको स्वतन्त्र संरचना र अर्थ गम्भीर छ । स्तरीय साइनो सिर्जना सजिलो छैन भन्ने बुझाइ । यी दुवै धारणाले आंशिक सत्य बोकेको पाइन्छ भने दोस्रो बुझाइको अन्तर्यमा पसेर मसिनो अध्ययन गरी हेर्दा साइनोले खास अनुभूति दिएको पाइन्छ । यसैमा छ यसको आकर्षण पनि ।
जनता जाग्ने कैले ?
बाटो छेक्दै कमिसन !
बन्छ र देश यो चालले ?
यसमा हुने व्यङ्ग्यात्मक र ध्वन्यात्मक अर्थ पहिल्याउने कुराले विशेष एवं गहन परिचय दिन्छ । त्यो भनेको प्रत्येक शब्दगुच्छाले दिने स्वतन्त्र अर्थसँगै सात,आठ र नौको योग चौबिस अक्षरी विषम संरचना विधि नै हो । सामान्यतः यसका सात कथनलाई यसरी पनि हेर्न सकिन्छ :
क) साइनो नेपाली मनमाटाले उमारेको नवीन प्रयोग हो । साहित्यको माध्यमबाट नवीन प्रस्तुति दिन खोज्ने स्रष्टा मनोवृत्तिको आकस्मिक सृष्टि हो साइनो । भनिन्छ साहित्यले जीवनको आलोचानात्मक यथार्थसँगै कल्पनातीत मनोविज्ञानको पनि अध्ययन गर्छ । साइनो पनि सिगै जीवनको चित्रण गर्ने गरी संरचित सूत्र कविताको नाम हो । हुन त स्रष्टा निरन्तर नवीनताको खोजीमा रहन्छ । यसै सिलसिलामा नवीन शिल्पशैली पछ्याई पाठकलाई घतपार्ने विचारले सूत्रात्मक साहित्यिक अभिव्यक्ति साइनोको आविर्भाव भएको हो । यसको संरचना, स्वरुप र नामले निजत्व बोकेर प्रस्फटन भएको हो । यो नौल्याइँको आफ्नै संरचना स्वरुप, तिथिमिति र नेपालीपन छ । यसैमा समस्त नेपाली वाङमयप्रेमीले गौरवबोध गर्न सक्ने सुगन्ध पाउन सकिन्छ । यसले साइनो सबै नेपालीको साझा सम्पदा हो भन्ने अनुभूति दिन्छ ।
ख) साइनो नेपाली भाषाले जन्माएको पछिल्लो सिर्जात्मक प्रस्तुति हो । नेपाली समाजमा प्रचलित शब्द साइनोले साहित्यिक विधा विशेष कविताको नाम संवहन गरेको छ । यसको संरचना र नाम नयाँ तर साहित्यको बहुचर्चित विधा कविताकै उपविधाका रुपमा चिन्ने÷चिनाउने गरिएको छ । यसको जन्म विज्ञानको नवीनतम चमत्कार (फेसबुक वाल) अनुहार किताबको भित्तामा भएको हो । यसैबाट धेरै स्रष्टा जोडिन पनि सम्भव भएको छ । यसलाई अल्पायुमै विश्वव्यापी बनाउने बलियो जग यही अनुहार किताबले जोडेका स्रष्टाहरु नै हुन् । एघार महिने उमेरको साइनो नेपाली भूमि र नेपाली भाषामा सीमित छैन । भूमिको कुरा गर्दा यो विश्वव्यापी भएको छ र भाषाको सन्दर्भमा नेपालीबाहेक थारु, भोजुपरी, संस्कृत, अङ्ग्रेजी, हिन्दी लगायतका भाषाहरुमा पनि लेखन थालिएको छ ।
ग) साइनो कविताको सानो रुप हो । यसको संरचना निश्चित अक्षर सङ्ख्यामा गरिन्छ । बिम्ब, प्रतीक, अलङ्कार, ध्वनिजस्ता कविताका अन्तर्वस्तुले यसलाई पनि प्रभाव पार्छन् । लय, अनुप्रास यसका पनि प्रिय अङ्ग हुन्, संरचना सुन्दर बनाउँछन् । शृङ्गार,हास्य आदि नवै रसको प्रयोग यसमा पनि गर्न सकिन्छ । वाचन विधानमा प्रत्येक गुच्छाको अन्त्यमा विश्राम दिएर (पहिलोमा विश्राम, दोस्रोमा विश्राम दिने र पहिलो, दोस्रो र तेस्रो–तेस्रो गरी) वाचन विधि अपनाउँदा एकरुपता कायम हुने देखिन्छ ।
मानुले दिन्छ मुरी पौरख रोप्छ असार
नेपाली यो संस्कृति महान् नेपाली यो संस्कृति महान् ।
घ) कतिपय सर्जक/पाठकले सात, आठ नौ अक्षरकै संरचना किन भन्ने जिज्ञासा राखेको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा सातले (आइत,सोम आदि) सात वारको नाम र समय जनाउँछ । आठले (पूर्वपश्चिम आदि) आठ दिशा जनाउँछ भने नौले साहित्यमा प्रचलित (शृङ्गार,वीर आदि) नवरस बुझाउँछ । यी तीनैको संयोग चौबिस अक्षरले चौबिस घण्टाको समय बताउँछन् । यसरी हेर्दा साइनोले गणितका उच्चाङ्क लिएर संरचना बनाएको विशेष प्रकारको शैलीका रुपमा आफूलाई चिनाउँछ । आध्यात्मिकहरुले सातबाट सप्तर्षि, आठबाट अष्टचिरञ्जीवी र नौबाट नवदुर्गा भन्ने अर्थबोध पनि गर्न सक्छन् । जसले जसरी बुझे पनि साइनो गणितका जेष्ठअङ्कहरुको विषम तर विशिष्ट संरचना हो । यो नेपाली भाषाको मौलिक रुप र सामाजिक सांस्कृतिक पक्षसँग पनि जोडिएको छ ।
ङ) साइनो छोटो समयमा सिङ्गै भूगोलमा फैलिएर धेरै स्रष्टा र पाठकप्रिय विधाका रुपमा अगाडि आएको छ । यो आजको व्यस्त पाठकले खोजिरहने मानवीय स्वभाव अनुसारको फरक साहित्यिक स्वाद लिएर रमाउन सकिने नवीन तर छोटो संरचनाको विशिष्ट प्राप्ति हो । यसको छरितो संरचना र अर्थ गाम्भीर्यले धेरै पाठकको मन जितेको छ । यसमा रमाउनु स्वाभाविक पनि हो । यो सूत्रात्मक स्वरुपको कसिलो रचना स्रष्टा र पाठक दुवैको मनोविज्ञान अनुकूल भएकाले यथाशीघ्र विस्तार हुन सकेको हो । यो छोटा तीन पङ्क्तिको पूर्ण संरचना हो ।
च) साइनोका सात, आठ र नौ अक्षरी संरचनाको अक्षर गणना नेपाली व्याकरणको सामान्य नियमलाई आधार मानेर गरिन्छ । प्रयोग आधा अक्षर, चन्द्रविन्दु, शिरविन्दु वा संयुक्त अक्षरको पनि गरिन्छ तर गणना सग्लो अक्षरको मात्र हुन्छ । साइनोमा दिइने भावार्थले मागेबमोजिमका लेख्यचिन्ह (। पूर्णविराम, ? प्रश्नवाचक, ! आश्चर्यबोधक आदि) प्रयोग गर्न सकिन्छ भने सामान्यावस्थामा तेस्रो पङ्क्तिको अन्तिममा (।) पूर्णविराम प्रयोग गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । साइनो शब्दगुच्छामा अन्तर्निहित अर्थ अभिधामा सीमित नरही लक्षणा र व्यञ्जनाबाट निस्कने ध्वन्यार्थ प्रबल रहन्छ । यसका त्रिपद स्वतन्त्र हुन्छन् । प्रत्येक पदको अर्थ स्वतन्त्र र एकमुस्ट दुवै लाग्छ । यस विधि अनुसारको सिर्जनाले साइनोको साख राखेर साहित्यमा सौन्दर्य भर्छ । यसको तात्पर्य अनेक थरी नेपालीमा रहेको सहिष्णु एकत्व हो । यी तीन पङ्क्ति हिमाल पहाड तराई भूगोल र शीत समशीत समशीतोष्ण हावापानीका प्रतीक हुन् ।
छ) साइनोको सिर्जनकर्म विद्युतीय सञ्जालबाट सुरु भएर यसमै झाँगिंदै छ । यतिखेर परपर धेरै परसम्म पुगिकेको छ । अलमल नगरी भन्न सकिन्छ साइनोले यति छोटो समयमा विश्वभरिका स्रष्टासम्मको यात्रा, सामाजिक सञ्जालबाटै सम्भव भएको हो । कापी–कलम र किताबविनै प्रचार–प्रसारले शिखर छुन सक्नु अनुपम उपलब्धि हो । यसले यति सजिलोसँग हामी साइनोकारलाई जोडेर आत्मीय बनाइदियो कि बयानै सम्भव देखिन्न । भौगोलिक हिसाबले परपर रहेका हामीलाई मित्रताको सूत्रले कसी नेपालीपनसित लछप्प भिजाएर वाङमयको श्रीवृद्धिमा समर्पित गराएको छ । यसरी साइनेप्रेमीका रुपमा स्थापित गर्न/गराउन सक्नु नै यसको ऐतिहासिक प्राप्ति हो । साइनो कविता प्रयोगमा आएपछि यसलाई पछ्ययाएर अरु नयाँ नयाँ प्रयोग पनि आइरहेका छन् । साइनोले नयाँ स्रष्टाहरु मात्र जन्माएको छैन नवीन शिल्पशैलीको प्रयोगमा पनि उर्जा दिइरहेको छ ।
४. साइनो नेपाली जनजीवनको मार्मिक अनुभूतिलाई मूर्तरुप दिने साहित्यिक कर्म हो । यसले अबलम्बन गरेको उल्लिखित मानक पछ्याएर सिर्जना हुँदै जाँदा निकट भविष्यमै समग्र नेपाली परिचय उचालिने विश्वास लिन सकिन्छ । यो समस्त नेपालीले नेपाली माटो खोस्रेर हुर्काएको साहित्यिक बिरुवालाई आवश्यक मलजल गरी स्थायित्व दिने साझा जिम्मेवारी निर्वाह सबैबाट हुन सकोस् । यहाँ यही अनुरोध छ ।
५. आज साइनो धेरै स्रष्टाको प्रिय कविताका रुपमा अगाडि आएको छ । कति स्रष्टा त कस्तो गति लिएर कहाँ पुग्ला ? भनी जिज्ञासु आँखा लिएर चौतारीमा पर्खंदै पनि छन् । जसले जहाँ बसेर पर्खे पनि अहिलेको व्यस्त समयबिच सूत्रमा प्राप्त साइनो साहित्यिक खुराकले पाठक मन जितेको छ । यही नै साहित्यको पछिल्लो नवीन शिल्पशैलीको साइनोलाई जीवन्त बनाउने बलियो आधार हो । स्रष्टा–साधनाले यसको मानक समाइदिए भविष्य आफै उजेलिँदै जानेछ । निरन्तर साधनाले साइनोलाई परिपक्व बनाउँदै लानेछ ।
६.साइनो सिर्जनाले अग्रज स्रष्टाको स्नेह र नवीन स्रष्टाको स्याहार पाएको छ । कतिपय स्रष्टको प्रथम कृतिका रुपमा प्रकाशित भएको छ । राष्ट्रिय रुपमा धेरै स्रष्टाका रचना सहित सैद्धान्तिक लेख साइनो सारथिको प्रकाशन भएको छ । यसै गरी जिल्लास्तरका पनि संयुक्त साइनो सङ्ग्रह सार्वजनिक भइसकेको छ । विभिन्न गोष्ठीहरुका यसले उच्चसम्मान प्राप्त गरिरहेको पाइन्छ ।
७.सामाजिक सञ्जालबाट आरम्भ र विकास भएको साइनो यसैमा सीमित छैन । छापा पत्रपत्रिकाले पनि विशेष महत्त्वका साथ स्थान दिँदै आएका छन् । मासिक पत्रिकाहरुमा शब्दाङ्कुर, शृङ्खला, अग्निचक्र, पुस्तकालय आवाज,जनमत, शब्द संयोजनहरुले स्थान दिएका छन् । यसैगरी साइनो प्रहरी, समष्टि, लोक भाका, नवप्रज्ञापन, लहरा, हिमाली गुराँस, गाउँले देउराली साप्ताहिक, परेवा पाक्षिक समेत धेरैतिर पुगेको छ । कति दैनिक, साप्ताहिक तथा अनलाइन पत्रिकाहरुले साइनो विकासमा अतुनीय योगदान पु¥याउँदै आएका छन् । यिनै संस्था र व्यक्तिहरुको उल्लेख्य देनकै प्राप्ति हो साइनोको यो जीवन्त लोकप्रियता ।
साइनो र सिर्जना
कम कर्तव्य साधना
मान्छेको जीवन बन्दना !! ‘अस्तु’
लामो समयपछिको भेटमा पनि रमाउन नसकेको महसुस गरेपछि साथीहरूले उसलाई…
कथाः जेनेरेशन ग्याप
टह टह जुनको उज्यालो सुनसान रातमा हामी एक हुल युवाहरु…
लघुकथाः गुन्द्रुक अनि अरे कथा
लघुकथा: अदृश्य साम्राज्य